कछुवाको गतिमा विकास पूर्वाधार : RajdhaniDaily.com sharethis
काठमाडौं । संविधान निर्माणसँगै स्थायित्वतिर लम्केको नेपालको राजनीति पुनः अस्थिरताको दिशामा बढेसँगै विकास पूर्वाधारमा असर परेको छ ।
गत आमनिर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्रमा विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिको नारालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका थिए । आमनिर्वाचनको चार वर्षसम्म आइपुग्दा समृद्धि तथा विकास निर्माणको दिशामा दलहरू अघि बढेको पाइएको छैन । राजनीतिक दलहरूले पछिल्ला दिनमा विकास र समृद्धिको नारालाई बिर्सिएर पुनः राजनीतिक जोड घटाउमा लाग्दा विकास निर्माणको काम ओझेलमा पर्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयं सरकारका कामकारबाहीभन्दा पार्टी काममा बढी समय खर्चिएको पाइएको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू समेत पार्टीको सभा सम्मेलन तथा गोष्ठी उद्घाटनलगायतका काममा बढी सक्रिय देखिएका छन् ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने सरकारले विकास निर्माणको कामलाई उत्ति नै प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको उच्च प्राथमिकता विकास निर्माण रहेको बताएका छन् ।
पार्टी संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत वृद्धि तथा विकास निर्माणको कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भनेर आवश्यक छलफलसमेत गर्दै आएका छन् ।
बढ्दो चिसो र शीतलहरको ज्यादती
ज्याकलिनसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको सुकेशको दाबी
बागलुङ –रुकुम (पूर्व) सिमा विवाद पेचिलो बन्दै
बिर्तामोडमा ग्रान्ड एजुकेसन फेयर सम्पन्न
२५ बर्ष पछि गाउँ बिजुली बत्ती बलेपछि गाउँले मख्ख
जसपा एकीकरण प्रक्रिया स्थगित ?
दश महिने शिशु अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने पक्राउ